Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Seychelles » Ny fiverenan'ny sambo fitsangantsanganana any Seychelles
miantso sambo fitsangantsanganana any Seychelles
Tamin'ny fivoriana natao ny Alarobia 31 martsa 2021, ny kabinetra dia niresaka ny amin'ny famerenana ny antso sambo fitsangantsanganana any Seychelles.
Nesorina ny moratorium amin'ny sehatry ny fitsangantsanganana an-tsambo any Seychelles.
Ho fanombohana, sambo fitsangantsanganana kely maharitra sy maharitra manana mpandeha 300 be indrindra no avela hilona ao Port Victoria.
Ny sambo rehetra dia tokony hanana mari-pahaizana momba ny fahasalamana sy fiarovana tsara, mifanaraka amin'ny fenitra iraisampirenena efa napetraka sy ny fenitry ny Minisiteran'ny Fahasalamana.
Ny fivoriana dia nankatoavina ny fanokafana eo no ho eo ny sehatry ny sambo fitsangantsanganana taorian'ny moratorium napetraka tamin'ny Mey 2020. Taorian'ny fivorian'ny tompon'andraikitra iray natao tamin'ny 16 martsa 2021 notarihin'ny minisitra tompon'andraikitra amin'ny fizahan-tany izay misy ny solontenan'ny governemanta sy ny sehatra tsy miankina handinika ny mety hitranga ny fisokafan'ny sambo fitsangantsanganana an-tsambo any Seychelles.
Miaraka amin'ny areti-mandringana COVID-19 sy ny loza mitatao mifandraika amin'izany ary ny fiantraikany dia napetraka ny May tamin'ny volana Mey 2020 teo amin'ny fidiran'ny sambo fitsangantsanganana tany Seychelles. Na izany aza, ny governemanta, nahalala ny fiantraikan'ny sambo fitsangantsanganana amin'ny toekarena, ary ankehitriny dia nanjary nanana fahatakarana lalindalina kokoa ny areti-mandringana manerantany ary koa ny fomba sy fomba hanalefahana ny fiparitahany, dia nanomboka ny fomba hamohana an'i Seychelles am-piandohana hamaky sambo fitsangantsanganana. mpitsidika.
Rehefa dinihina ny loza mety hitranga amin'ny areti-mifindra COVID-19, dia nanaiky ny kabinetra fa, ho fanombohana, dia sambo fitsangantsanganana kely maharitra maharitra manana mpandeha 300 be indrindra no avela hitoby ao Port Victoria ary hitsangantsangana amin'ny ranon'ny Seychelles. Ireo sambo ireo dia eo amin'ny faran'ny haitraitra mahasarika mpanjifa avo lenta miaraka amin'ny herin'ny fandaniam-bola avo lenta, ka hanampiana fanampiny fanampiny.
Nanoro hevitra ny kabinetra fa ny sambo rehetra dia tsy maintsy manana mari-pahaizana miorina amin'ny fahasalamana sy fiarovana, mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena efa napetraka sy ny fenitry ny Minisiteran'ny Fahasalamana. Ireo protocole dia tsy maintsy miitatra amin'ny fidinan'ny mpanjifa mandeha fitsidihana na hetsika hafa mifandraika amin'izany. Fanampin'izany, mba hampihenana ny fiantraikan'ny fipoahan'ny COVID-19 ao anaty sambo dia nanaiky ny Kabinetra fa tsy maintsy ampirisihina hatao vaksiny ny ekipazy sy ny mpandeha rehetra.
Nanaiky ihany koa ny kabinetra fa, amin'ny alàlan'ny torolàlana hentitra, mpitsidika maromaro ihany no avela hidina amin'ireo nosy voatondro sasany mba tsy hanelingelina ny tontolo iainana sy ny filaminana tian'ny vahiny be karama be nosy.
Ankoatr'izay, ny Kabinetra dia nanoro hevitra ny komity mpiaramiombon'antoka tompon'andraikitra izay tarihin'ny Ministera tompon'andraikitra amin'ny fizahan-tany mba hamolavola drafitra feno amin'ny asa, milaza ny fomba ahazoana tombony be indrindra amin'ireo mpizahatany mitsangantsangana. Ny komity dia handinika sy hamolavola ireo sehatra ilaina ilaina mba hanamorana ny hetsika sy programa fanampiny hanohanana ny fitomboan'ny sehatra ary hamela ny fidiram-bola hidina amin'ny toekarem-pirenena
Ny fanapaha-kevitra dia mifanaraka amin'ny fomba fijerin'ny governemanta ny maodely fizahan-tany 'sarobidy be, ambany fiatraikany' izay ezahan'i Seychelles hiezahana ihany koa, sy ny filàna fiarovana ny fahasalaman'ny mponina ao an-toerana sy ireo mpitsidika.